Nezvedu - Pro-Lean Technology Co., Ltd.
E-mail Tsigiro enquires@proleantech.com
PROLEAN HUB inzvimbo yekuenda-kune sosi yemakambani etekinoroji uye ekutanga kugadzira michina mitsva.Chiono chedu ndechekuva anotungamira mhinduro mupi weOn-Demand Manufacturing.Kuti tiite izvi, tiri kushanda nesimba kuita kuti kugadzira kuve nyore, nekukurumidza, uye kuchengetedza mari kubva kuprototyping kusvika pakugadzira.
Isu tinoshandura mazano ako kuita zvigadzirwa kuburikidza nemaitiro edu anotungamirwa zvakanaka.
Paunenge wava nepfungwa itsva,
kana chimwe chinhu chinogadzira.
kubata mainjiniya edu.
Iwe wakasununguka kubata mainjiniya edu maawa makumi maviri nemana pazuva.Ivo vanozoongorora nekukasira kuomarara kweprojekiti uye kukupa chirevo uye quotation.
Wobva wangomirira mavhiki mashoma uye zano rako richava rechokwadi.
Isu tinoshandira vatengi pasi rese mumaindasitiri akasiyana siyana, kusanganisiramarobhoti, mota, aerospace, uye zvinhu zvevatengi zvakapetwa…
Nekubatanidza hunyanzvi hwetiweki nehunyanzvi hwekugadzira-mumba, tinogona kupa vatengi vedu mukana wekukurumidza mitengo, inofungidzirwa nguva yekutungamira, nzira yekugadzira uye yakazara dimensional yekuongorora.
Isu tinokwanisa kupa nekukurumidza manufacturability mhinduro kune vatengi uku tichiona zvakare inoshanda uye inodhura mhinduro dzekugadzira chikamu chimwe nechimwe.
Inofungidzirwa Kutungamira Nguva
Yedu yekugadzira maitiro inoita kuti vatengi vagamuchire yakazara mhinduro kune chero chinodiwa.Izvi zvinosanganisira zvikamu zvakaoma uye nemazvo, senge nhengo dzemaziso, zvikamu zvemotokari, zvishandiso zvekurapa kana zvikamu zvemuchadenga.
Pakunotora maitiro, tinopa Material Sitifiketi kuti iwe usimbise iyo chaiyo zvinhu.Yedu yemhando yekudzora sisitimu yakagadzirirwa kutarisa rimwe nerimwe basa, kubva kumisikidza, kuburikidza nekugadzirwa, nekuuya nenguva kune vatengi vedu.Panguva yechigadzirwa chakaongororwa uye chagadzirira kuendeswa, Yakazara Dimensional Yekuongorora Chirevo ichateverwa.
Real-time purojekiti kufambira mberi inogadziridza
Basa redu rinokurumidza uye rakarongeka!Kubva pakatanga kuonana nesu, kusvika pakuchengetedzwa kwakachengeteka kwezvikamu, isu tinotarisira mapurojekiti evatengi.Isu tinochengeta vatengi vakagadziridzwa pamamiriro ekugadzira, tichishandisa Project yekutevera fomu inotumirwa kune vatengi vhiki nevhiki.vatengi vanogona kuona zvakajeka mamiriro ekugadzira emapurojekiti avo.
Sei PROLEAN HUB
-Kuchengetedza mari kuburikidza nemaitiro edu ekugadzira
-Kuchinja kupfupi pakati pemakwikwi (uye mwero wepamusoro wekubudirira)
-Kugadzira inoshanduka dhizaini sarudzo kune zvese zvigadzirwa zvako
-Kukupa iwe sarudzo yakazara yekugadzira mabhiriji
Chiono chaProlean ndechekuve anotungamira mhinduro mupi weOn-Demand Manufacturing.
Iwo mashanu akajairika jekiseni repurasitiki moldi ...
Mhando 6 dzepurasitiki dzinofa, unodziziva here ...
Jekiseni Molding: Technology Overview, A...
Dhizaini mapoinzi uye nzira dzekugadzirisa dze...
Kuvandudza Dhizaini yeSheet Metal Parts...
Kero: Kuvaka A1, Fuhai Technology Industrial Park, Fuyong Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen
Basics Of Cnc Machine Machining Fabrication Metal Steel Fabrication Metal Casting Service Prototype Machine Plastic Molding Sizes